Soso-kevitra momba ny fandefasana blôgy iray mahomby
Ho an'ny sehatra e-commerce rehetra, mitazona fifandraisana tsy tapaka amin'ny mpanjifanaodia singa manan-danja amin'ny fampiharana asa. Ny blaogy dia mametraka fifandraisana matanjaka amin'ny mpanjifanao. Noho izany, ny fampidirana bilaogy iray amin'ny vohikalanay dia iray amin'ny ankamaroan'nyteknika mahomby SEO.
Ny manam-pahaizana Semalt Services Digital, Frank Abagnale dia manazava ny lafiny manan-danja amin'ny fampiasana bilaogy ho fitaovana fampitomboana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa - market value of semi trucks.
Ho an'ny tranokalan'ny aterineto, ny fampidirana bilaogy dia midika fotsiny hoe manana sehatra iray misy irayAfaka mizara lahatsoratra ary misy votoatin-kevitra vaovao. Amin'ny ankabeazan'ny rafitra fitantanana ankapobeny, dia matetika ny sehatra "bilaogy" io.Ho an'ny mpamorona hafa, ny famaham-bolongana bilaogy dia mety ho asa mora, noho ireo maro karazana maodely sy CSS. Ny fahasamihafana dia aorafitra fitantanana content izay ampiasain'ny blaogy. Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny fampidirana blôgy dia midika mivantana ny tsindry bokotra iray.Ireo hevitra momba ny fitorahana blaogy ho an'ny nichanao dia mety ahitana:
Fanamarinana ny traikefa
Vaovao mifandraika amin'ny tranokalanao
Asa fanompoana manokana, sampana na asa
Aza mieritreritra be momba ny olana ara-teknika ao amin'ny blôginao.
Mety misy karazana fanontaniana marobe rehefa mametraka blôgy ao amin'ny tranonkala iray. Faohatra, mety manontany tena ny ROI, ny fandaniana amin'ny fikojakojana, ny votoaty halefa, ny fomba hanampiana ny blôgy amin'ny tranonkala iray, ny fampindramam-bola amin'ny mpikirakira sy ny mpikirakiraary ny endriky ny automation amin'ny blôgy. Hevitra manan-danja ireo, saingy tsy tokony handany fotoana betsaka izy ireo.
Ny hevitra momba ny fanaovana bilaogy dia tsy mitaky teknika betsaka amin'ny ambaratonga voalohany.Ny tanjon'ny bilaogy dia ny mamorona fomba tsara sy mahomby hiresahana amin'ny mpanjifanao. Ny blôgy dia fiara iray hampahafantarana izany fifandraisana izanyNy zava-miseho, tsy ny fampiasana tranonkala tsara tarehy..
Azonao atao ny mametraka fanentanana ao amin'ny bilaogy. Ohatra, anontanio ny andron'ny vehivavy, ary ianaoManana tranonkalan'ny lamaody amin'ny aterineto. Ao amin'ny bilaogy, azonao atao ny manolotra tolotra toy ny freebie. Ohatra, afaka miteny ianao hoe "Ento miaraka aminao ny vadinao,ary hahazo zana-tsompitra maimaim-poana ianao. "Maro ny fomba azonao ampiasaina mba hifandraisana amin'ireo mpanjifanao amin'ny fampiroboroboana. Ohatra:
1. Ambarao ao anaty lahatsoratra bilaogy izany. Azonao atao ny mampiasa lahatsoratra bilaogy hanazavana ny endrika samihafany tantaranao. Ity lahatsoratra ity dia havoaka amin'ny alàlan'ny permalink.
2. Mizara ny URL ao amin'ny media sosialy. Ampiasao ny fampahalalam-baovao sosialy ho an'ny fantsona ao an-toerana hamoahana anaolahatsoratra. Azonao atao ny mampiasa doka misy tanjona izay manondro ny tanànanao. Ireo tranonkala media sosialy toy ny LinkedIn sy Twitter dia mety ho toerana tsara hanombohana
3. Alefaso mailaka. Ampahatsiahivo ny mpampiasa anao momba ny fampiroboroboana. Aza adino ny manomeny rohy mankany amin'ny lahatsoratra ary ny famintinana ny votoatiny.
4. Manangana adiresy Google AdWords. Azonao atao ny mampiasa teny manan-danja izay mikendry manokanazavatra eo amin'ny toerana misy anao. Hamafiso ny votoaty ary hitohy ny fifamoivoizana.
Afaka manomboka mitoraka bilaogy amin'ny fotoana rehetra ny olona. Betsaka ny orinasa natsangana natsanganabilaogy izay mifandray amin'ny endrika samihafa amin'ny alàlany. Tranonkala maro no afaka mandray soa avy amin'ny fampiasana bilaogy iray na dia amin'ny fomba mihodinkodina aza. Afaka mamaky bilaogy irayho tsara fomba hifampiresahana tsy tapaka amin'ny mpanjifanao. Izy io dia mirakitra ireo singa samihafa toy ny fanehoan-kevitra sy forums, izay mamoronany fototry ny fifandraisana mpanjifa tsara.